Naya Post Nepal | परपुरुषसँग श्रीमती फ’रार भएपछि , मलेसियाबाट गुहार माग्दै श्रीमान (हेर्नुस भिडियो)
परपुरुषसँग श्रीमती फ’रार भएपछि , मलेसियाबाट गुहार माग्दै श्रीमान (हेर्नुस भिडियो)
वैदेशिक रोजगारि नेपालिहरुको लागि रहरभन्दा बढि बा’ध्यता हो । देशमा रोजगारिको अवसर नहुदा नेपालका युबायुबतिहरु बर्सेनि हजारौको संख्यामा बिदेशिइरहेका छ्न र उनिहरुको गन्तव्य भने खा’डी मुलुकहरु बन्दै गएका छ्न । घरपरिवारको अबस्थामा केही सुधार आउने हिसाबले दुइचार पैसा कमाउन भनी गएका नेपालीहरुको स”मस्याको बिषय किन बन्दैछ पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी ?
श्रीमान बिदेश जादा श्रीमती अर्कै भा”ग्ने त कहिले श्रीमती घरमै छ्दा श्रीमान अर्कै महिलासग लागेर गा”यब हुने कुराहरु त सामान्य विषय नै बन्दै गएका छ्न पछिल्लो समय त । आजको घटनापनि यहि विषयमा मेल खाने प्रकृतिको रहेको छ । मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी लक्ष्मीझमा घर भइ हाल वैदेशिक रोजगारिको क्रममा मलेसियामा कार्यरत राम बहादुर श्रेष्ठ नाम गरेका एक पुरुष आफ्नी श्रीमती बिगत केही दिनदेखि बे’प”त्ता भएको भन्दै आफ्नो गु”नासाहरु पो”ख्दै मिडियामा भिडियो कलमार्फत जोडिएका छ्न ।
पेट दु”ख्यो भनेकी श्रीमती पहिले धामिकोमा लगिएको र त्यसपश्चात खाना बनाएर खाना खाएर डाक्टरकोमा जान्छु भनेर हिडेको आज एक हप्ता हुदासम्म पनि घर फर्किइनन । यसरी अस्पताल जान्छु भनेर हिडेकी श्रीमती एकाएक गा”यब हुदा यता श्रीमान भने म”र्नु न बाच्नु भएका छ्न । यसअघि पनि उनी अर्कै पुरुषसग भा”गिसकेकी रहिछिन तर परिवारले छुटाएर ल्याएपछि भने अब यस्तो ग”ल्ती नदोहोर्‍याउने बाचा पनि गरेकी रहिछिन अम्बिकाले ।
अम्बिका श्रेष्ठ नाम गरेकी उनकी श्रीमतिको आज एक हप्तासम्म पनि कुनै खवर नरहेको भन्दै उनी मिडियामा आएका छ्न । अब उनलाइ श्रीमतीबाट केही आशा नरहेको बताउछ्न उनी । आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउनुपर्ने र श्रीमती जोसग गएपनी म”तलब नहुने कुरा उनले खुलाए । मान्छेलाइ सुध्रिने मौका एकपटकमात्र हुन्छ जो अम्बिकाले पाइसकेकि रहिछिन । क”ठै ब”रा ! मनमा निकै नै पी”डा रहेको र आफुलाइ बि”श्वा”स”घा”त भएको भन्दै निकै गु”नासो गरे उनले ।
घाटिमा मंगलसुत्र, कानमा गहना अनि हातमा एउटा औँठी लिएर भा”गेको बताउछ्न उनी । क”ठै कति सम्म नि”ष्ठुरी त उनि, २६ महिनाकी छोरिलाइ माइतमा नै छा”डेर गएकी रहिछिन उनि । उनी भागेको यो पहिलोपटक भने हैन, तर अब यस्तो नदोहोर्‍याउने बाचा गरेपछी फेरि भा”ग्लिन भनेर शं”का गर्ने ठाउँ नै नरहेको बताउछ्न उनी । पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
२०७८ पुष २१, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 239 Views